Margarekha ती मजदुर ५ दिनका भोका थिए उनीहरुको उद्धार गर्नु मानविय धर्म थियो : व्यवसायी पौडेल – Margarekha
कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनको अवस्थामा छ । दैनिक रुपमा लकडाउनका कारण जिल्ला बाहिरबाट आफ्नो घरतर्फ पैदल यात्रीहरु सयौ माइल हिडेर आए । ती पैदल यात्रुहरुलाई वैशाख ३ गतेदेखी कोहलपुर प्रजातान्त्रिक व्यवसायी संघ र नेपाली काग्रेस वडा नं.११ ले निशुल्क खाजा र भोजन व्यवस्थापन ग¥यो सोही विषयमा मार्गरेखा संम्वाददाता सम्झना शाहीले बाँके प्रजातान्त्रीक व्यवसायीक संघका जिल्ला सहसचिव युवा सफल व्यवसायी र हाल भोजन व्यवस्थापनका संयोजक लक्ष्मणराज पौडेल संग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:
नमस्कार म लक्ष्मण राज पौडेल पेशाले युवा व्यवसायी र प्रजातान्त्रीक व्यवसायीक संघको जिल्ला सहसचिव कोहलपुर ११ मा स्थायी बसोबास ।
लकडाउनको समयलाई कसरी प्रयोग गरिरहनुभएको छ ?
कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनको परिस्थितीमा पुग्यो । २०७७ वैशाख ३ देखी लामोदुरीबाट पैदल यात्रा गरिरहेका यात्रुहरुलाई खाजा र भोजन व्यवस्थापन गरि उनीहरु घरसम्म पुयाउने कार्यमै दिनहरु बितिरहेका छन् । सरकारको नियम अनुसार सुरक्षित रुपमा घरमा बस्नुपर्ने हो तर मजदुरहरुको पिडाले उनीहरुको दुख देख्दा मनले मानेर बरु ज्यान नै जोखिममा राखेर काम गर्न थालियो । अपलत्र पैदल यात्रुहरुको उद्धारमै बेस्त छौँ ।
देश लकडाउनका कारण ज्यालादारी मजदुरहरुले दुख पाए यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
लकडाउनका कारण देशका विभिन्न ठाउमा काम गर्न गएका ती मजदुरहरु भोकभोकै सयौँ मायल हिडन बाध्य भए । भोकभोकै हिडेका ती मजदुरलाई न सरकारले हेयो जनताले धेरै दुख पाएपछी सरकारको आखा खुलेको हो प्रदेश नंं. ५,६,७ को कोहलपुर चौराय भएर जाने पैदल यात्रीहरुको पिडा निकै मर्मस्पश थियो । लकडाउनको दिनदेखी ती भोकै हिडिरहेका पैदल यात्रुहरु कर्णाली प्रदेश, सुदुरपश्चिम, बाँके बर्दियाका थिए भने कतिपय अन्य जिल्लाका ती सबै यात्रुहरुलाई निशुल्क भोजन व्यवस्थापन गरि सकुसल घर तर्फ पठाउनु हाम्रो मानविय धर्म थियो ।सो कार्य हामी सम्पन्न गयौ ।
पैदल यात्रीहरुका लागि भोजन व्यवस्थापनको संयोजक भएर काम गर्दा के कस्तो अनुभव भयो ?
हरेक काम गर्दा चुनौती अवश्य हुन्छ तर सामाना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । कोहलपुर चौराय भएर हिडने सयौँ पैदल यात्रीलाई भोजन व्वस्थापन गर्न त्यती सहज थिएन ।कोहलपुर प्रजातान्त्रीक व्यवसायी संघमा आवद्ध उद्योगी,व्यापारी,समाजसेवि,राजनैतिक दल,युवा तरुणहरुको ठूलो सहयोग र कोहलपुर साना तथा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाबाट भएको सहयोगलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु भने रात दिन नभनी खाना पकाउनका लागि विशेष जिम्मेवारी बहन गर्ने तरुण युवाहरु ,महिला संघमा आवद्ध टिमको सहयोगले सामाजिक सेवा गर्ने थप प्रेरणा मिल्यो ।
तपाईहरुले भोजन व्यवस्थापनमा सामाजिक दुरी कायम र पार्टीको व्यानरको आलोचना आयो नि ?
प्रश्नका लागि विशेष धन्यवाद कोहलपुर प्रजातान्त्रीक व्यवसायी संघ र नेपाली कांग्रेस वडा नं. ११ कार्यसमितीको संयुक्त आयोजनामा वैशाख ३ गतेबाट तयारी खाजा र पानीको व्यवस्थापन गतेबाट कोहलपुरको चौराहामा निशुल्क भोजन व्वस्थापमा जुटेका थियौ जसको संयोजक म आफै थिए । हामीले सरकारले लागु गरेको निति नियमलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेकै हो । सामाजिक दुरी कायमका लागि हामी गोलघेरा हालेर व्यवस्थित यात्रुलाई खाना खुवाएको सबै साक्षी हुनुहुन्छ अब रहयो पार्टीको व्यानरको कुरा खाना जस्तो सम्वेदनशिल कुरा महामारीका बेला केही घटना घटे कस्ले जिम्मा लिने हो जसको पूर्ण जिम्मा कोहलपुर प्र्रजातान्त्रीक व्यवसायी संघ र नेपाली काग्रेस वडा नं. ११ कार्यसमिती ले लिनेगरी व्यानर लगाइएको हो ।
तपाईहरुले संचालन गरेको भोजन व्यवस्थापनमा कति मजदुरहरुको उद्धार भयो ?
हाम्रो समूहले ७ हजार २ सय ८२ जना यात्रुलाई भोजन व्यवस्थापन र १३ हजार १ सय २० जनालाई खाजाको रुपमा चिउरा ,दालमोट,भुजा,बिस्कुट व्यवस्थापन गरेको रेकर्ड रहेको छ ।
सत्ता पक्ष र पतिपक्षको छुटाछुटै भोजन व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक थियो ?
कोहलपुर चौरायमा हाम्रो शुरुवात गरिसकेका थियो हामीले सहकार्यबाट संचालन गरौं पनी भनेका थियौं तर सत्तापक्षका साथीहरुले हामीले संचालन गरेको भोजन व्यवस्थापनलाई बरु बन्द गराएर आफु फरक ठाउमा भोजन व्यस्थापन कार्यमा लाग्नुभयो । उहाँहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु बरु खबर गर्नहोस हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।
स्थानिय सरकार र सुरक्षाकर्मीको सहयोग कतिको पाउनुभयो ?
हामीले संचालन गरेको पैदल यात्रुहरुका लागि संचालन गरेको भोजन व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकारको सहयोग पैदल यात्रुहरुका लागि गाडीको व्यवस्थापन गरेको थियो केही बाहेक सबैको राम्रो सुझाब मिलेको थियो ।
आगामी दिनका कार्यक्रमहरु के छन ?
अब लकडाउनमा अलपत्र र पैदल हिडेर आउने यात्रुहरु कमी आइसकेको छ भोलीबाट हामीले खानाको कार्यक्रमलाई रोक्ने र अरु नयाँ थप कार्यक्रमलाई स्वरुप परिवर्तन गरि संचालन गछौँ । हामी सामाजिक सेवा र मानविय सेवामा निरन्तर पाइला चालिरहन्छौ ।
अन्तमा तपाईलाई र तपाईको मिडिया परिवारलाई धन्यवाद महामारीको समयमा जस्तोसुकै समस्या आउन सक्छन् । सके आफैं गरौ नसके सहयोग गरौँ सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरौ धन्यवाद
१५ बैशाख २०७७, सोमबार २०:५५ प्रकाशित